नेपाल आज | सरकारले जारी गर्यो म्यारिज अध्यादेशः सामाजिक दुरि कायम गर्नेदेखि पिसिआर रिपोर्ट पेश गर्नेसम्म
मङ्गलबार, ०४ कार्तिक २०७७ गते प्रकाशित - नेपाल आज
२०७७ सालको वडा दशैं सुरु भएको छ। कोरोनाको महामारीमा पनि मानिसहरु घर पुग्न हतार–हतार गरिरहेका छन्। काठमाण्डौं उपत्यमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिददिनै वढ्न थालेपछि सरकारले पनि दशैंलाई उपत्यका खाली गराउने अवसरका रुपमा लिएको छ। सोमवार वसेको मन्त्री परिषदको वैठकले सार्वजनिक सवारी साधनमा पुर्ण क्षमतामा यात्रु वोक्न पाउने निर्णय गर्नुले पनि सरकार उपत्यका खाली गराउन कति हतार गरिरहको छ ? भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
सरकारले नै माहौल वनाई दिएपछि सर्वसाधारण घर नजाने कुरै भएन। उपत्यका छोड्नेको संख्या हरेक दिन वढिरहेको छ। गाउँमा घरहरु भरिन थालेका छन्। समग्रमा दशैंको रौनक सुरु भएको छ। दशैंलाई राम्रो लाउने, मिठो खाने र रमाईलो गर्ने पर्वका रुपमा पनि दिईन्छ। केटाकेटी पिङ्ग खेन्छन भने वयस्कहरु म्यारिज खेल्ने पुरानै चलन छ। रमाईलोका लागि खेलिने म्यारिजले कहिलेकाही दुर्घटना निम्त्याएका उदाहरण पनि छन्।
३. पिपिई लगाएर मात्र खेल्न पाईने। पिपिइको ब्यवस्था गर्नै नसके मास्क, पञ्जा र फेस सिल्ड अनिवार्य लगाउनु पर्ने। जाड रक्सीको सट्टा बेसार, कागती, अधुवा, गुर्जो पानी खानु पर्ने।
(ख) खेल भईरहेको अवस्थामा कटुवाले माल काटे पश्चात् माल वा जोक्कर परेन भनी कुइकुई गरि म्यारीजको बुक चलाउने, था...था...थु...थु...गर्ने तथा तासै हुत्याउने सम्म जस्तो अपराध गरेमा त्यस्तो खेलाडीलाई १३ प्वाईन्ट तिराई तुरुन्त खालेले खेलबाट बर्खास्त गरी अर्को खेलाडी नियुक्त गर्न सक्नेछ।
यो ‘समाजवादी म्यारिज ऐन ०७७’ विशद्ध मनोरञ्चनका लागि तयार गरिएको हो। देशको संविधान र संविधान अन्तर्गत वनेका ऐन/नियमसँग यसको कुनै तालमेल र सम्वन्ध छैन। तर, वर्तमान संकटपुर्ण अवस्था र समस्यासँग वच्नका लागि यसमा समावेश भएका केहि विषय र प्रशंगहरु सान्दर्भीक छन्।
फेरि पनि राजाका रुपमा पुनर्स्थापित भएँ भने मेरै भाग्यले हुन्छु : पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र
राजतन्त्र फर्काउन झापामा र्याली, ‘फ्रन्ट लाइन’मा राप्रपा
कोरोना भ्याक्सिनले साइड इफेक्ट गरे क्षतिपूर्ति पाउने
सीमा समस्यालाई भारतले पनि स्वीकारेको छः परराष्ट्र मन्त्री ज्ञावली